Report: Myanmar’s media not free or fair — လွတ်လပ်မျှတခြင်းများ ဆုံးရှုံးနေသော မြန်မာ့မီဒီယာ – Free Expression Myanmar
May 03, 2020 by Coordinator	in Publications ထုတ်ဝေစာများ
Democratic elections require robust public debate in order to be free and fair. Media freedom, including the freedom to investigate, access, and publish information without restriction, isaprerequisite for such debate. Onlyafree media can ensure that political parties, leaders, and their promises are properly scrutinised.
Journalists are the best placed to know how much freedom the media has, and can compare their current experiences to the past to identify the direction that media freedom is heading.
FEM’s fourth nationwide survey measures journalists' opinions onarange of issues that are critical for determining media freedom in Myanmar. The results are discouraging, again.
Journalists conclude that media freedom is declining for the third consecutive year, and that the government, including the military, is the main cause of this.
Ominously, journalists believe that their risks have increased over the past year. Violence is more common, courts are punitive, and perpetrators act with impunity. It is unsurprising that self-censorship is growing asaresult.
Journalists are also identifying new risks. 2020 is the first year whenasignificant proportion of journalists are reporting corporate censorship online.
The 2020 general elections are an opportunity to change direction, and journalists want political parties to make real and significant manifesto commitments to protect media freedom.
Make ambitious manifesto commitments to protect media freedom.
To the government, including the military
Conduct an open and inclusive consultation with journalists to establishaplan of action to increase media freedom. This consultation should focus on designingaholistic approach to legal reform which includes both changing laws and changing the behaviours of government officials.
Conductaseparate but interlinked public consultation on ending state control of the media, including military-owned media.
Immediately remove all barriers to the media's access to conflict areas while simultaneously ordering all parts of the state to facilitate journalists' wherever possible.
Until legal reforms are implemented, ensure that no government official acting in an official capacity brings any criminal complaint againstajournalist.
Ensure that all allegations of violence against journalists are investigated inatransparent, prompt, impartial, and efficient manner.
Encourage and empower judges to apply the law according to democratic standards, in particular in media freedom-related cases by interpreting any law narrowly and in favour of the principle of liberty as demanded in the Constitution Article 6.
Empower judges to encourage complainants to seek mediation from the Myanmar Press Council during the pre-trial period. Empowerment includes reassuring judges that they will not be disciplined for doing so.
Invite independent media experts, such as from the Myanmar Press Council, to the court to provide advice to the court, independent from either parties' legal teams.
Investigate and submit to Parliamentareview of media freedom in Myanmar, with recommendations for legal and practical reforms.
To the Myanmar Press Council
Establishamechanism to proactively submit expert testimony to lawyers and courts for every criminal case against journalists. Where journalists have not abided by the Myanmar Press Council's Code of Conduct, submit arguments on the basis of necessity and proportionately.
Vote for candidates in the upcoming Myanmar Press Council elections who have the best ideas and clearest commitment to defend media freedom.
ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲများ လွတ်လပ်ပြီးမျှတရန်အတွက် ပြည်သူလူထု အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုများ (public debate) အား ကောင်းရန် လိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုများအတွက် မရှိမဖြစ်သောအရာမှာ ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာစုံစမ်းခွင့်၊ လက်လှမ်းမီပိုင်ခွင့်နှင့် ပုံနှိပ်၊ ထုတ်လွှင့်ခွင့်တို့ အပါအဝင် မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ပင် ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်သောမီဒီယာရှိခြင်းက နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ကတိ ကဝတ်များကို စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် အာမခံချက် ဖြစ်သည်။
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် မည်မျှရှိသည်ကို အသိနိုင်ဆုံးသောအလုပ်ကို လုပ်နေသူမှာ သတင်းသမားများ ဖြစ်သည်။ သတင်း သမားများသည် ယခင်နှင့် ယခု အတွေ့အကြုံများကို ချိန်ထိုးနှိုင်းယှဥ်ပြီး မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်၏ လားရာဦးတည်ချက်ကို တွက်ဆဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
FEM ၏ စတုတ္ထမြောက် ပြည်လုံးကျွတ်စစ်တမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် အခြေအနေကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အရေးပါသည့် အရေးကိစ္စအများအပြားနှင့်ပတ်သက်၍ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သတင်းထောက်များ၏ ထင်မြင်ယူဆ ချက်များကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်။ ရလဒ်များမှာလည်း စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာပင် ထပ်ဖြစ်နေခဲ့သည်။
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် ဆက်တိုက်ကျဆင်းနေသည်မှာ သုံးနှစ်ခန့်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီး ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ တပ်မတော်အပါအဝင် အစိုးရအဖွဲ့ကြောင့် အဓိကဖြစ်သည်ဟု သတင်းထောက်များက ကောက်ချက်ချသည်။
ပြီးခဲ့သောနှစ်အတွင်း အန္တရာယ်ရှိသည့် အခြေအနေများ မြင့်တက်ခဲ့သည်ဟု သတင်းထောက်များက ရှုမြင်ကြသည်မှာ စိတ်ပူ စရာကောင်းသော အချက်ဖြစ်သည်။ အကြမ်းဖက်မှု ပုံမှန်လိုလို ဖြစ်သည်။ တရားရုံးများက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အပြစ် ဒဏ်ချသည်။ အမှန်တကယ် ပြစ်မှုကျူးလွန်လေ့ရှိသူများမှာလည်း ဖမ်းဆီးအရေးယူမခံရဘဲ လွတ်မြောက်နေသည်။ ထို့ကြောင့် ရလဒ်အနေဖြင့် [သတင်းသမားများ] ကိုယ့်အရေးအသားကိုယ် ဆင်ဆာပြန်ဖြတ်တောက်မှု (Self-censorship) ပိုမိုအားကောင်းလာသည်မှာ အထူးအဆန်း မဟုတ်ပေ။
သတင်းထောက်များ ထပ်မံ ထောက်ပြသည့် အန္တရာယ်ရှိသည့် အခြေအနေသစ်များလည်း ရှိသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်သည် အွန်လိုင်းပေါ်ရှိ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုများအပေါ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများ (သို့မဟုတ်) အုပ်စုများ၏ တားဆီးဖြတ်တောက်မှု (Corporate censorship) အကြောင်းကို သတင်းသမားထု ကြီးကြီးမားမားက ရေးသားဖော်ပြလာသည့် ပထမဆုံးနှစ် ဖြစ် သည်။
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် ဦးတည်ချက်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန် အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပင်ဖြစ်ပြီး မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီများက စစ်မှန်ပြီး သိသာထင်ရှားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်များပေးရန် ဂျာနယ်လစ်များက လိုလားနေသည်။
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ကာကွယ်ရန် ပြင်းပြသောဆန္ဒဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကတိကဝတ်ပြုပါ။
အစိုးရနှင့်အတူ စစ်တပ်သို့ တိုက်တွန်းချက်
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် တိုးမြှင့်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်စီမံ ကိန်းတစ်ခုကို တည်ထောင်ချမှတ်ရန် ပွင့်လင်းပြီး အားလုံးပါဝင် သော ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲတစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ပါ။ ထိုညှိနှိုင်းဆွေး နွေးပွဲသည်တရားဥပဒေဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုနှင့်၊ အစိုးရအရာရှိ ကြီးများ၏ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်များအား ပြောင်းလဲမှု စသည့် ၂ မျိုးလုံးပါဝင်သည့် အားလုံးအကျုံး ဝငုံးဝင်သော တရားဥပဒေဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို အလေးပေးဆောင် ရွက်သင့်သည်။
နိုင်ငံတော်မှထိန်းချုပ်ထားသောမီဒီယာနှင့် စစ်တပ်မှပိုင်ဆိုင်သော မီဒီယာများ အဆုံးသတ်ရေးအတွက် သီးခြားဖြစ်သော်လည်း အ ပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုရှိသော အများပြည်သူဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးညှိ နှိုင်းပွဲများကို ပြုလုပ်ရမညသင့်သည်။
ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသတွင် မီဒီယာများသတင်းရယူခွင့် တားဆီး ပိတ်ပင်ထားမှုအား လုံးကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပေးပါ။ တပြိုင်နက် တည်းတွင် သတင်းမီဒီယာသမားအတွက် လိုအပ်သည်များကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် နိုင်ငံတော်၏ဒေသ အား လုံးသို့၏ဒေသအားလုံးသို့ အမိန့်ထုတ် ပြန်ပေးရမညပေးသင့်သည်။
တရားဥပဒေရေးရာဆိုင်ရာတွင် သတင်းမီဒီယာများအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြု လုပုလုပ်၍ပြီးစီးသည့်တိုင်အောင်၊ မည်သည့် အစိုးရအရာရှိကမျှ အရာရှိ၏ သြဇာအာဏာကို အသုံးပြုပြီး မည် သည့် သတင်းမီဒီယာသမား တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ရာဇဝတ် ကြောင်းအရ တိုင်ကြားအရေးယူခြင်းမရှိစေရ။
သတင်းမီဒီယာသမားများအပေါ်တွင် အကြမ်းဖက်သည်ဟု စွတ်စွဲ ထားမှုများအားလုံးကို ထိရောက်လျှင်မြန်စွာဖြင့် ဘက်လိုက်မှု မရှိ စေရဘဲ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရမညဆေးသင့်သည်။
အထူးသဖြင့် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ဆက်စပ်နေသော အမှုအ ခင်းများကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ (၆) တွင် ပြဆိုထားသည် နှင့်အညီ၊ လွတ်လပ်မှုစံကိုထောက်ရှုပြီးဥပဒေများကို ထိရောက် တိကျစွာပြန်ဆိုကာ ဒီမိုကရေစီစံများနှင့်ကိုက်ညီအောင် အသုံးပြု ကြရန် တရားသူကြီးများအားတိုက်တွန်း ဆောင်ရွက်စေသင့်သည်။
တိုင်ကြားသူများအနေဖြင့် ပဏာမအဆင့်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသတင်း မီဒီယာကောင်စီမှ ကြားဝင်စေ့စပ် ဖြန်ဖြေခြင်းကို ရယူနိုင်ရန် တရားသူကြီးများက တွန်းအားပေးသင့်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် တရားသူကြီးများသည်လည်း စည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်ခံထားရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ကြောင်း သေချာစေရမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကဲ့သို့သော သီးခြားလွတ်လပ် သော မီဒီယာကျွမ်း ကျင်သူများကိုတရားရုံးသို့ဖိတ်ကြားပြီး အ ကြံညဏ်ပေးစေရမည် ။ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်သည် နှစ်ဖက်သောအသင်း အပင်းများ၏ ဥပဒေအဖွဲ့မှလည်း ကင်းရှင်းမှုရှိရမည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သို့ တိုက် တွန်းချက်
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်သုံးသပ်ချက်ကို စုံစမ်းစစ် ဆေးပြီး တရားဥပဒေဆိုင်ရာနှင့် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှု ဆိုငုဆိုင်ရာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုအတွက် တိုက်တွန်းထောက်ခံချက်များနှင့်အတူ လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းပါ။
သတင်းမီဒီယာသမားများနှင့် သက်ဆိုင်သော ရာဇဝတ်မှုများအ တွက် တရားရုံးများနှင့် ရှေ့နေများထံ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၏ သက် သေခံချက်ကို အသင့်တင်သွင်းနိုင်ရန် အဖွဲ့တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်စေရန်။ အကယ်၍ ဂျာနယ်လစ်များက မီဒီယာကောင် စီမှ ထုတ်ပြန်ထားသော မီဒီယာကျင့်ဝတ်နှင့် မကိုက်ညီလျှင်၊ လျှောက်လဲချက်များကို လိုအပ်ချက်နှင့် အချိုးအစားညီညွတ်မျှတ မှုအပေါ် အခြေပြုရေးသားတင်သွင်းပါ။
လာမည့် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို မဖြစ်မနေ ပြတ်သားစွာ ကာကွယ်နိုင်ပြီး အကောင်းဆုံးသော စိတ်ကူးအတွေးအခေါ်ရှိသူ ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများကို မဲပေးရွေးချယ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါသည်။
Download "Myanmar’s media not free or fair" >>
လွတ်လပ်မျှတခြင်းများ ဆုံးရှုံးနေသော မြန်မာ့မီဒီယာ >>
Click here to read FEM's previous journalist survey report from 2018 >>
Tagged with: Media licensing, Myanmar Press Council, News Media Law, Penal code ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ, Printing and Publishing Law, Protection of journalists and human rights defenders, Public service media
Opinion poll on media freedom — မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ် ဆန္ဒသဘောထား ကောက်ယူမှု